Haweeyneyda ugu da’da weyn Dunida oo dhan oo u Dabaal-dagtay Sannad-guuradeedii 116-aad – Radio Daljir
Maajo 25, 2015 9:54 b 0
Isniin, May 25, 2015 (Daljir) — Jirelean Talley oo loo tixgaliyo inay tahay qofka ugu da’da weyn Adduunka oo dhan xilligan nool ayaa 116-sano jirstay ,iyada oo ku sugan magaalada Inkster ee dalka Maraykanka, waxaana xaflada dhalashadeeda ka so qayb-galay inta badan qoyskeeda.
Talley ayaa dhalatay sannadkii 1899-kii, Waxayna noolayd labo Qarni, sidoo kalena waxay goob-joog ahayd ,iyada oo xilalka ay iska badalayaan 20 madaxweyne oo kala duwan, iyadoo Hambalyo Dhalashadeeda ku Aaddan uu u soo diray Madaxweynaha Maraykanka, Barack Obama.
“Khibradaada Nololeed iyo Durugsanaanta Xikamaddaada ayaa Calaamad u ah meesha uu Qarankeennu kasoo safray sanadku markuu ahaa 1899-kii.“ ayuu Obama ku yiri waraaq uu u soo diray haweenaydan.
Talley ayaa ku dhalatay Georgia 23-dii bishii shanaad sanadkii 1899-kii ,waxaana sanadku markuu ahaa 1935-tii ay u soo wareegtay gobolka Machigan, iyada iyo saygeedii Alfred oo isna dhintay sanadkii 1988-dii isaga oo 95-sano jir ah.
Ugu dambeyn, Haweeynaydan oo qoysas badani ay ka tarmeen ayaa loo doortay inay tahay Ruuxa Adduunka ugu da’da weyn bishii Afaraad ee Sannadkan; kaddib markii Magaalada Arkansas ay ku geeriyootay Gerrude Weaver oo ahayd 116-sano jir.